နေထိုင်မှုပုံစံ Archives - Page6of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” ဆီးချုပ် ဝမ်းချုပ်အန္တရာယ် “ ” အပြင်အိမ်သာတွေသွားရမှာ မသတီဘူး၊ အောင့်ပဲထားလိုက်တော့မယ် ” ” အိမ်ရောက်မှ အိမ်က အိမ်သာပဲသွားတော့မယ် ” အသန့်အရမ်းကြိုက်တဲ့ သူတွေ၊အရမ်းရွံတတ်တဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေပါ။အထူးသဖြင့် ခရီးရှည် သွားတဲ့အချိန်မျိုးဆို ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာ ပိုဒုက္ခရောက်တတ်ကြပါတယ်။တွေ့ရ…
ခြေသလုံးပေါ်ပြေးပြေးတက်တဲ့ကြွက် ကြွက်တက်တယ်ဆိုတာဘာလဲ ကြွက်တက်တယ်ဆိုတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိကြွက်သား (များသောအားဖြင့် ခြေသလုံးကြွက်သား) ဟာ ရုတ်တရက်တောင့်တင်းလာပြီး ကြွက်သားတွေညှစ်တဲ့အတွက် နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အိပ်နေလျက်နဲ့ပင် ကြွက်တက်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် ကြွက်တက်ရသလဲ? ကြွက်တက်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ ၁။ ကြွက်သားများကို အဆမတန်ခိုင်းစေခြင်း၊ ကြွက်သားဒဏ်ရာရခြင်း။ ၂။…
အအေးမိ၊တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ ဘာတွေစားကြမလဲ? ခုတလော မိုးလေးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာစရှိသေး …. ဟိုသူ့ကြည့်လည်း တဟွတ်ဟွတ်၊ ဒီသူ့ကြည့်လည်း နှာရည်တရွှတ်ရွှတ်၊ ကျောင်းတွေရုံးတွေမယ်လည်း နေမကောင်းလို့ ခွင့်တိုင်သူတွေအများအပြားပင်။ရာသီအကူးအပြောင်းဖြစ်သည်မို့ အအေးမိ၊တုပ်ကွေးက စလာချေပြီ။ အအေးမိ၊တုပ်ကွေးက ဖြစ်ပြီဟေ့ဆို အနည်းဆုံး သုံးလေးရက်မှ တစ်ပတ်ဆယ်ရက်ထိကြာတတ်သည်။အဖျားပျောက်သွားရက်တောင်မှ နှာစေး၊ချောင်းဆိုးက နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ထိကျန်နေနိုင်သေးသည်။ဒါကြောင့် မဖြစ်ခင်တည်းက…
အစာမရှိဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါသလား? လေ့ကျင့်ခန်း( Work Out) လုပ်တဲ့အခါ အယူအဆ ၂မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့က အစား စားပြီးမှ လုပ်သင့်တယ်။ တချို့ကလည်း အစား မစားခင်လုပ်မှသာ ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းတယ် လို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာတော်တော်ငြင်းခုန် လေ့ရှိကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။အဖြေကဘာလဲဆိုတာ တူတူကြည့်ကြစို့လား။အစားမစားဘဲ အစာအိမ်ဗလာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ၁)…
အသန့်ကြိုက်လွန်ခြင်း ၊အသေချာလွန်ခြင်းက စိတ်ရောဂါလား ဇီဝကကို မေးကြတယ် ။“ဆရာ ကျွန်တော်က အပြင်သွားခါနီး အိမ်သာ၄-၅ ခါတက်ရမှ ။တံခါးပိတ် ၊မပိတ်ကို ၄-၅-၁၀ခါ စစ်ပြီးမှ သွားတတ်တာ ။ဒါပုံမှန်ပါပဲနော် ။ကျွန်တော်ကိုက အသေအချာ လုပ်တတ်တာ ဆရာရေ ။” ပြောရမယ်…
ကားမူးျခင်းကို ဘယ္လိုေျဖရွင်းကြမလဲ? ကားမူးတတ္တဲ့သူတြေဆိုတာ အျခားသူတြေခရီးသြားဖို့တက်ြကြေပ်ာ်ရွှင်နေခိန္မွာ …. ကားမူးပြီး လမ်းမွာ ပို့အန္မွာ တြေးပူပြီး ကားစီးဖို့တောင်ကြောက်နေရသူလေးတြေပါ။ ကားစီးတဲ့အခါ ခရီးတိုပဲျဖစ်ျဖစ် (ခရီးဝေးဆို ပိုဆိုးတာပေါ့) …ကားစထြက်ပြီး နည်းနည်းကြာတာနဲ့ ခေါင်းမူးမယ်…ပို့ခ်င်အန္ခ်င္လာမယ်…အန္ထြက္မယ်….ဒီတော့ သြားရလာရအဆင္မေျပ…လူကြားထဲ ဒုက္ခေရာက္တာပေါ့။ တစ္ခါတရံ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားတြျေဖူဖေ်ာ့လာျခင်း အစားမစားနိုင်ျခင်း…
Weight, Stress and Sleep
” အိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် “ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏကြားရလေ့ရှိတဲ့ ” မဝဘဲနေမလား…. တစ်ချိန်လုံးအိပ်နေတာကို !!! ” ဆိုတဲ့စကားဟာ မှန်ပါရဲ့လား? တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့…. ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ (တနည်းအားဖြင့် အိပ်ရေးမဝသူတွေအနေနဲ့…
လေထုညစ်ညမ်းမှုကနေ မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ? Air Pollution လို့ခေါ်တဲ့လေထုညစ်ညမ်းမှုဟာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ သတိပြုပြီးပြသနာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာတော့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမီးလောင်တာကစလို့ သတိပြုစရာ ကျန်းမာရေးပြသနာတစ်ခုဖြစ် လာပါတယ်။ တကယ်ဆို ဒီလိုအမှိုက်ပုံကြီးမီးလောင်တာကသိသာလွန်းတဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်တွင်းခြံတွင်း အမှိုက်တွေကို မီးရှို့နေတာဟာလည်း လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေတာပါပဲ။ ခုပတ်ဝန်းကျင်မှာသိသိသာသာ…
လေထုထဲက အဆိပ်တွေ အခုရက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ အနောက်မြောက်ဘက်မှ မီးခိုးငွေ့တွေကြောင့် လူအတော်များများ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျိုးအမည်ပေါင်းများစွာကိုမီးလောင်ပြီး အခိုးအငွေ့အဖြစ်ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးကိုအနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်စေတတ်တာတော့အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားတွေနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်လား။ စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေမီးလောင်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့ လေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့ဓာတ်ငွေ့နဲ့…